Archive du 20191024
Vondrona Eoropeanina Manara-maso akaiky ny toe-draharaham-pirenena
Nihaona manokana sy nitsidika tamim-pomba fifanajana tamin’ny Masoivohon’ny Vondrona Eoropeanina eto Madagasikara Giovani Di Girolamo ny filohan’ny antenimierandoholona Rivo Rakotovao omaly.
Tsy misy tahotra sy henatra intsony Kandidan’ny IRD no manao tsena mora
Toy ny zava-niseho teny Ambavahaditokana, izay nanaovana antso amin’ny peta-drindrina hoe tongava hisitraka ny tsena mora, ary ampiarahana amin’ny sarin’ny kandida ben’ny tanàna tohanan’ny IRD,
Tontolo politika Ho avy masiaka ny HVM
Hipoitra ny HVM amin’ny volana novambra, rehefa nisafidy nangina satria olona nitondra izy.
Arlete Ramarson « Manitsakitsaka ny zon’olombelona ny fitondrana »
Manoloana ny fananganana ilay tetikasan’ny filoham-pirenena amin’ilay tanàna vaovao, izay haorina eny Ambohitrimanjaka, dia
Fandikan-dalàna ataon’ny kandida Am-polony ny fitarainana voarain’ny CENI
Tapa-bolana tsy hiatombohan’ny fampielezan-kevitra dia efa mahatratra folo (10) mahery sahady ireo tsy fanarahan-dalàna voaray eo anivon’ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (CENI).
Fiarahamonim-pirenena ROHY Mila manamafy ny serasera ny fitondrana
«Atao ampy sy matotra ny serasera, ny fifampidinihina ary ny fampandraisana anjara ny olona eny ifotony.
Krizin-tsolika sy delestazy Nokianin’ny depiote Ratsivahiny ny praiminisitra
Manoloana ireo olana sedrain'ny Malagasy ankehitriny toy ny Jiro tapaka,
Sampandraharahan’ny fananantany Mpiasa maro no esorina hametrahana olon’ny minisitra ?
Sikilaonina be ato amin’ny sampandraharahan’ny fananantany amin’izao, hoy ny mpiasa tafaresaka taminay.
Krizin-tsolika Manomboka velon’ahiahy ireo taksiborosy sy kaoperativa
Noferana ho 50.000 ariary ny fatran’ny gazoala ho an’ireo taksiborosy sy mpajifa iray,
Lalàna mifehy ny mpitsoa-ponenana Maro ireo sakana amin'ny fampiharana azy
Maherin'ny 150 ireo mpitsoa-ponenana monina eto Madagasikara raha ny tarehimarika navoakan'ny fikambanana CDA, izay miahy azy ireo.
Sehatra iombonana ho an’ny fananantany «Tsy tokony hiteraka fahantrana ny Tanà-Masoandro»
Azon’ny fanjakana atao ny maka tanim-panjakana iray noho ny tombontsoan’ny daholobe araka ny lalàna and. faha 34 ao anaty lalàmpanorenana sy efa voafaritra mifandraika amin’izany.
Fakiolten’ny fitsaboana -Ankatso Nahazo “microscope” manara-penitra
Notoloran’ny masoivohon’i Korea Atsimo miasa sy monina eto amintsika “microscope” manara-penitra ny fakiolten’ny fitsaboana eny amin’ny oniversiten’Ankatso.
Ankeniheny,Tanjombato Azo niaraka tamin’ny sabatra lava lela ilay mpanendaka ikohizana
Voasambotry ny Polisy miasa ao Soavina Atsimondrano ny 21 okobra lasa teo teny Ankeniheny,Tanjombato tokony ho tamin’ny 8 ora sy 30mn alina, ny lehilahy iray, miaraka amin’ny sabatra efa ho iray metatra.
Analakely Tsy misy ahiana ho voan’ny haromotana ireo lanin’ny alika
Efatra ireo nokaikerin’ny alika romotra teo Analakely ny alatsinainy atoandro teo.